အခှနျခံအကြောင်းကိုသည့်အခါသညျယရှေုဆွေးနွေးပွဲသူမသနားတျောမူနဲ့သနားကရုဏာအတှကျဘုရားသခငျကိုမေးမွနျးတဲ့အခါမှာသူကကောင်းကင်သို့သူ၏မျက်စိမပေးရုတ်သိမ်းနိုင်အောင်။ ယရှေုဘာကွောငျ့အသေးစိတ်ခဲ့သလဲ ကကောင်းကင်ပြာလှည့်ပွင့်လင်းမျက်စိနှင့်အတူဆုတောင်းဖို့အသုံးပြုကြောင့်!
အဲဒီမှာသူတို့ကခေါက်လက်နှင့်ဆုတောင်းပဌနာမသမ္မာကျမ်းစာဥပမာဖြစ်ပါသည်, မဟုတ်သလိုသူတို့ဆုတောင်းပဌနာမှာသူတို့ရဲ့မျက်စိကိုပိတ်ထိုအရပ်၌မဆိုဥပမာပါ! ဒါကြောင့်သင်မိမိတို့လက်ကိုဖမ်းယူနှငျ့သငျဆုတောငျးသောအခါသင်၏မျက်စိပိတ်ဖို့သင့်ကြောင်းဘယ်မှာရှိသနည်း ဟုတ်ကဲ့ကသမ္မာကျမ်းစာမှမဟုတ်ပဲ!
ယောဟနျသ 11:41 ။ ထိုအခါသူတို့ကသေလွန်သောသူတို့သည်လူကိုလျောင်းတော်မူရာအရပ်ထဲကနေကျောက်ကိုယူသှားလေ၏။ ထိုအ ယရှေုကမိမိမျက်စိကြီးပြင်း ခြင်းနှင့် said: အဘခမည်းတော်, သင်တို့ကိုငါအကြှနျုပျကိုကြားရကြပြီသင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ယရှေုသညျခမညျးတျောကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလျှင်, မိမိကြည့်ရုပ်သိမ်း။ သူနှင့်တကွဆုတောင်းလေ၏ ပွင့်လင်း မျက်စိ!
ယောဟန် 17: 1st ယရှေုသညျ ပြော. , ထို့နောကျ သညျကောငျးကငျမှသူ၏မျက်စိမရုပ်သိမ်း ဆိုသည်ကား, ခမညျးတျော, အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သားတော်သည်လည်းသင့်ကိုငါမချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ, သင့်သားတော်ကိုဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း:
သူဆုတောင်းပြီးမှသညျယရှေုသညျကောငျးကငျဘုံဆီသို့သူ့မျက်စိကြီးပြင်း။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ကသူတို့မျက်စိဖွင့်နှင့်အတူဆုတောင်းဖို့သမ္မာကျမ်းစာကြောင်းရှင်းလင်းစွာမြင်! ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့သမ္မာကျမ်းစာလမ်းအပေါ်ဆုတောင်းရန်ကြိုးစားသည်မဟုတ်လော သငျသညျဆုတောငျးပေးလာမယ့်အချိန်, မိုဃ်းကောင်းကင်မှသင်၏မျက်စိရုတ်သိမ်းပေးရန်! ယရှေုပွုတျောလမျး၌ဆုတောင်း!
မဿဲ 14:19 ။ ထို့နောက်သူကမြက်ခင်းပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်ဖို့လူတွေကိုမှာထားတော်မူ၏။ သူသည်ထိုအမုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ကို ယူ. , မိုဃ်းကောင်းကင်သို့တက်ရှာနေ နှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်မုနျ့ကိုဖဲ့လျက်, တပည့်ကအားပေး၏, လူမှတပည့်။
လုကာ 18:13 ။ သို့သော်အခှနျခံဝေးရပ်ပင်မဟုတ်ဘူး သူ့မျက်စိမြှင့် ကောင်းကင်သို့ကား, မိမိရင်သားကိုရိုက်နှက်, ဘုရားသခင်သည်အပြစ်သားငါ့ကိုသနားဖြစ်တော်မူသည်ကား။
1 တိ 2: အဋ္ဌ ငါထို့ကြောင့်နေရာတိုင်းယောက်ျားသငျ့တယျလိုခငျြ , သန့်ရှင်းသောလက်ဆုတောင်းချီကြွ အမျက်ဒေါသနှင့်သံသယမရှိဘဲ။
ရှင်ပေါလုကသူတို့ကိုရုပ်သိမ်းလက်နှင့်ဆုတောင်းပဌနာချင်တယ်။ သူ Clasp အကြောင်းကိုဘာမျှကပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ဆုတောင်းဖို့က vanligate လမ်းကြီးပြင်းလူတို့လက်ဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာများထဲမှမိမိတို့လက်ကိုဖမ်းယူသင့်တယ်သောအစဉ်အလာသနည်း အဘယ်သူမျှမပြုလုပ်တိုင်းအမှု၌ကျမ်းစာထဲကပါပဲ။
သူတို့ဆုတောင်းပဌနာသည့်အခါသူတို့မိမိတို့လက်ကိုမြှင့်မယ်လို့သတိပြုပါ။ ထို့ပြင် "သန့်ရှင်းသောလက်တက် ... ဆုတောင်းနှင့်ဓာတ်လှေကား ... " သူတို့အဲဒီလိုမယ်လို့မှတ်ချက် နေရာတိုင်း ။ ဒါကြောင့်ဘုံbönesättဖြစ်ခဲ့သည်။
1 ဓမ္မရာဇဝင် 8:54: "ထိုသို့ရှောလမုန်သည်ဤစကား, သခင်ဘုရားအပျေါ၌ဆုတောင်းနှင့်ခေါ်ဆိုခကိုလက်စသတ်ပြီးမှ, သူများကောင်းကင်ယံပျံရုပ်သိမ်းမိမိလက်နှင့်မိမိအဒူးထောက်ခဲ့ရှိရာထာဝရဘုရား, အရာယဇ်ပလ္လင်မှထ။ "
ဆာလံ 63: 4: "ငါသည်သင်တို့၏နာမကိုငါငါ့လက်ကိုချီမည်, နေသမျှကာလပတ်လုံးငါအသက်ရှင်သည်အတိုင်းသင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူလိမ့်မည်။ "
ဆာလံ 141: 2: "ညနေပိုင်းတွင်ယဇျပူဇျောအဖြစ်ငါ့လက်၏ချီသောနံ့သာပေါင်းနှင့်တူသင်တို့ရှေ့မှကြှနျုပျ၏ပဌနာခိုင်လုံသောစေ။ "
မြည်တမ်းစကား 3:41: "ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူဘုရားသခင်အားငါတို့စိတ်နှလုံးကိုနှင့်လက်တို့ကိုချီကြွစို့!"
ကမျြးစာကိုငါတို့သည်သူ့ကိုအဖို့ဆုတောငျးသောအခါပြီးတော့ကျနော်တို့ကိုဘုရားသခင်အားငါတို့လက်နှင့်မျက်စိရုတ်သိမ်းပေးရန်နိုငျသညျ, ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်။ ဒါဟာသမ္မာကျမ်းစာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Vecka 49, tisdag7december 2021 kl. 16:02